AKHRISO:- Wax Badan Ka Baro Xanuunka Gaaska Calooledka – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaAKHRISO:- Wax Badan Ka Baro Xanuunka Gaaska Calooledka
Hiiraan Xog, Apr 18, 2018:- Maanta waxaynu soo qaadaneynaaa waxa uu yahay gaasku ( gastritis) waxa keena calamadaha lagu garto sida loobaaro iyo waliba sida lodaaweeyo.
waa maxay gastric(gastritis)?
#Maxaa sababa gasric(gastritis)?
In badan inaad mantagto
In gaajada laysku daawado
In aashatada calooshu ayna dheeli tirnayn
In cuntada xawaashka badan la isticmaalo (spicy)
Inaad isticmaasho daawooyinka layidhaah anti-inflammatory drug sida asprinta.
#Calaamadaha lagu garto gaaska(gastritis)?
Yalaalugo(labolabo), mantag, laabjeex iyo mantag dhiig la socdo.
Inuu soo noqnoqdo xanuun xagga caloosha ah sidii nabar oo kale. Caloosha oo dibbirta, apatite xumo. Miisaanka oo yaraada.
#Sidee lagu garan/ aqoonsan karaa magaca cudurka iyo astaanta saxda ah….
endoscopy; waa qalab afka inta qofka laga galiyo ilaa caloosha sawiraya kaasa lagu ogaan karaa hadduu nabar jiro
dawooyinka yareeya acid caloosha
iyo antibiotic haddii bacteria ay keento
dawooyinka aan lagu qorin inaad iska qaadato waxay halis Ku tahay calosha siiba dawooyinka xanuun baabi’iyaasha
cunooyinka suugadu ku badan tahay ama basbaaska iyo dhanaanka badan leh iyana iska yarayso
Like page; Dhakhtarka Weydii
AKHRISO:- Madaxweyne Farmaajo muxuu ka qabanaya Gaashaandhigga ?